प्रदेश ३ Archives - Page4of 12 - Dna Nepal
प्रदेश ३ को पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठक, यस्ता छन् निर्णयहरु २९ माघ २०७४, सोमबार १३:२०
हेटौंडा, माघ २९ । प्रदेश नम्बर ३ को पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठक बसेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल सम्मिलित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापित सहितको मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठक बसेको..
सकियो एक महिने मकर मेला
हेटौंडा, २९ माघ । मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको कुष्माण्ड सरोबर त्रिबेणी धाममा लागेको एक महिने मकर मेलाको आज समापन भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरीबल महतले पूर्णाआहुती दिएर मेलाको समापन गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै मेयर महतले..
प्रदेश ३ मा मन्त्रीमण्डल विस्तार, शालिकराम जम्मरकटेल र केशव स्थापित मन्त्रीमा नियुक्त
हेटौंडा,२९ माघ । प्रदेश नम्बर ३ मा आज २ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरिएको छ । सोमबार मात्रै पदभार ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश नम्बर ३ मा २ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री पौडेलको मन्त्री मण्डलमा..
प्रदेश ३ को सभामुखमा सानु श्रेष्ठ २७ माघ २०७४, शनिबार १२:३८
काठमाण्डौं, माघ २७ । प्रदेश नम्बर ३ को सभामुखमा एमालेका सानुकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध चयन भएका छन् । शनिबार भएको निर्वाचन प्रक्रियामा श्रेष्ठको मात्र एक्लो उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । दिउँसो १ बजेसम्म मनोनयनका लागि..
गुटको चेपुवामा अष्टलक्ष्मी, डोरमणी प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री २६ माघ २०७४, शुक्रबार ११:५९
पोखरा, माघ २६ । प्रदेश ३ को संसदीय नेतामा निकै चर्चा भएकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य पराजीत भईन् । एमालेबाट संसदीय दलको नेतामा डोरमणी पौडेल निर्वाचित भएसँगै नेपालका सात वटै प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री नहुने निश्चित भएको छ । मुख्यमन्त्री बन्नका..
मुख्यमन्त्री बन्न नेताको ठेलमठेल १४ माघ २०७४, आईतवार ०२:५०
पोखरा, माघ १४ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक केही दिनपछि बस्दैछ । बैठकपछि लगत्तै मुख्यमन्त्री र सभामुख, उपसभामुख लगायत मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनेछ । बहमुत प्राप्त दलको संसदीय नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । दलको बैठकबाट..
प्रदेश प्रमुखले पहिलो बैठक डाक्दै (प्रदेश ४ को कहिले ?) ११ माघ २०७४, बिहीबार १२:१०
पोखरा, माघ ११ । प्रदेश प्रमुखहरुले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकको मिति घोषणा गरेका छन् । संघीय संरचना अनुसार सात वटै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुखहरु तोकिएसँगै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आह्वान गरेका हुन् । हालसम्म ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशको पहिलो अधिवेशन..
राष्ट्रियसभामा १७ निर्विरोध, को कहाँबाट उम्मेदवार बने ?(सूचीसहित)
काठमाण्डौं, माघ ११ । माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि ७ वटा प्रदेशमा ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । हिजो सातै प्रदेशमा रहेका निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता भएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा १७..
कोइरालाले सम्हालिन् प्रदेश प्रमुखको कार्यभार ७ माघ २०७४, आईतवार ०८:०३
हेटौंडा, माघ ७ । नम्बर प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले शनिबार साँझ पदभार ग्रहण गरेकी छन्। हेटौंडा–१० स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उनले पदभार ग्रहण गरेकी हुन्। पदभार ग्रहणपछि आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रममा कोइरालाले विकास र समृद्धिको..